के तपाईलाई थाहा छ ? केटीले तपाईंलाई मन पराएमा देखाउँछन् यी १० लक्षणहरु – " सुलभ खबर "
के तपाईलाई थाहा छ ? केटीले तपाईंलाई मन पराएमा देखाउँछन् यी १० लक्षणहरु
केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु । लौ है केटा साथीहरु हो बिभिन्न माया(प्रेमका खोज तथा अनुसन्धानको ब्यापक अध्ययन गरी तपाईंहरु माझ यो लेख प्रस्तुत गरेका छौ ।भरपुर फाइदा उठाउनुहोस । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ ।
भनिन्छ, महिलालाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो । महिलाका सबै लक्षण तथा प्रतिक्रियाहरु अ’विश्वसनीय तथा दु’र्वोध्य हुन्छन्, जसलाई खुट्याउनै सकिन्न भन्छन् मनोविज्ञहरु ।
त्यसोभए महिलाको भावनालाई कसरी बुझ्ने त रु कोही केटीले आफुलाई मन पराइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने रु मनोविज्ञहरुका अनुसार यस्ता केही लक्षणहरु छन् जसका आधारमा महिला आफुप्रति नतमस्तक भएको कुरा पुरुषले ठम्याउन सक्छन् । केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु यस प्रकार छन् ।
१. तुरुन्त प्रतिक्रिया दिएमा कुने केटीले यदि तपाइँको मोबाइल म्यासेज, इमेल, ट्विट तथा फेसबुक म्यासेजको तत्कालै जवाफ दिन्छिन् । तपाइँको फोन कललाई बेवास्ता गर्दिनन् र फोन उठाउन नपाएमा माफी माग्दै लामो म्यासेज पठाउँछिन् भने बुझ्नुहोस् तपाइँले उनको मन पगालिसक्नुभएको छ ।
१०.तपाईंका हरेक कुराको याद राखेमा उनले तपाइँले भनेका हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने मात्र होइन तपाइँले उनीसँग गरेका साना भन्दा साना कुराको वृतान्त पनि याद गर्छिन् । चाहे तपाइँले मदिराको न’शामा मद्यरातमा उनीसँग टेलिफोनमा गरेको जन्मदिनको उपहार बारेको कुरा किन नहोस् ।
११. अरु केटीको कुरा गर्दा असहज भएमा यदि तपाइँले अरु कुनै केटीलाई इंगित गर्दै त्यो केटी राम्री छे भन्नुभयो भने उनको अनुहार तत्कालै अमिलो हुन्छ। उनले त्यसपछि तपाइँलाई लेक्चर सुनाउन थाल्छिन् । एक घण्टा नै किन नलागोस् विभिन्न उदाहरण तथा दृष्टान्त दिएर तपाइँले राम्रो भनेको केटी यस अर्थमा खराब छ भन्ने पुष्टि गरेरै छाड्छिन् ।